Ballon D’or ရမှတ်တွေ ထွက်ပေါ်လာပါပြီ . . . မက်ဆီ နဲ့ ဗန်ဒိုက် တို့ ဘယ်နှစ်မှတ်ကွာခဲ့သလဲ - SPORTS MYANMAR
Ballon D’or ရမှတ်တွေ ထွက်ပေါ်လာပါပြီ . . . မက်ဆီ နဲ့ ဗန်ဒိုက် တို့ ဘယ်နှစ်မှတ်ကွာခဲ့သလဲ
ပြင်သစ် နိုင်ငံ ပဲရစ် မြို့မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်သွား ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ဘလွန်းဒီအောဆု ချီးမြင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှာတော့ ဘာစီလိုနာ အိုင်ကွန် မက်ဆီ က ဒီဆုကြီးကို ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီ ဟာ ဒီဆုအတွက် လီဗာပူး ခံစစ် မှူး ဗန်ဒိုက် နဲ့ အတော်လေး အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ရသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗန်ဒိုက် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ လီဗာပူး အသင်း ခံစစ်ကို အကောင်းဆုံးဦးဆောင် ပေးခဲ့ ပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲနိုင်အောင် ကူညီ ပေးနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Nations League မှာလည်း နယ်သာလန် အသင်းကို ဒုတိယဆုရာအောင် စွမ်းဆောင်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လည်း ဘာစီလိုနာ အတွက် လာလီဂါ ချန်ပီယံ ဆုတခုသာရယူ ပေးနိုင် ခဲ့ပြီး အာဂျင်တီးနား အသင်းနဲ့ အတူ ကိုပါအမေရိကဖလားပြိုင်ပွဲမှာ တတိယဆုသာဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ မက်ဆီကို ကျော်လွန်ပြီး ဘလွန်းဒီအောဆုရှင်ဖြစ်လာမယ့် လို့ ယူဆခဲ့ကြသူ အများအပြား ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မက်ဆီ က သူ့အတွက် ဆဋ္ဌ မမြောက် ဘလွန်းဒီအောဆုကြီး ကို ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ သူ့ရဲ့ မဟာပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူ ရော်နယ်ဒို နဲ့အတူ ၅ကြိမ်အဖြစ် ဘလွန်းဒီအောဆု သမိုင်းမှာ ပူးတွဲစံချိန်ဝင်ထားမှု ကို ချိုးဖြတ် နိုင်ခဲ့တာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ် ဘောလုံး မဂ္ဂဇင်း က ကြီးမှူး ပြီး ပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ အခုနှစ်အတွက် ဘလွန်းဒီအော ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင် ကစားသမားအသီးသီးရ ရှိခဲ့တဲ့ မဲအရေအတွက် တွေဟာ အခုချိန်မှာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။Sport Witnessရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ မက်ဆီဟာ ဗန်ဒိုက်ထက် ရမှတ်သာ အသာရပြီး ဒီဆုကို ဆွတ်ခူးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မက်ဆီ ဟာမဲအရေအတွက် ကြောင့် ရမှတ် စုစုပေါင်း ၆၈၆ မှတ်ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ကြီး ဗန်ဒိုက်ကတော့ မဲအရေအတွက်ကြောင့် ရမှတ် ၆၇၉မှတ် ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တတိယနေရာ မှာရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုကတော့ စုစုပေါင်း အမှတ်၂၀၀ ကျော်နည်းပါးခဲ့ပြီး ၄၇၆ မှတ်သာရရှိခဲ့ပါတယ်။
စတုတ္တနေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ မာနေးက ရမှတ် ၃၄၇ မှတ် ပဥ္စမနေရာမှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဆာလတ်ကတော့ ၁၇၈ မှတ်စီအသီးသီးရရှိခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန်ကာတင်စာရင်ဝင်ကစားသမားတွေဟာ မဲပေးသူတွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ၆မှတ်ကနေ ၁မှတ်အတွင်း ရရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုနှစ်အတွက် ဘလွန်းဒီအောဆု ချီးမြှင့်ပွဲဟာ လီဗာပူး အသင်းအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ ညချမ်း တခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ စုစုပေါင်း ရ ယောက် အထိ ပါဝင် လာနိုင်ခဲ့သလို ထိပ်ဆုံး ၅ဦးစာရင်း မှာလည်း အသင်းသား ၃ ယောက်တောင် ပါဝင်နိုင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားချက်တခုအနေနဲ့ ကတော့ ညာနောက်ခံ ကစားသမား လေးအာနိုးဟာ ဘလွန်းဒီအောဆုအတွက် ရပ်တည်မှုမှာ အဆင့် ၁၉ နေရာမှာသာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကြောင့် သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေကသူ့ကို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လီဗာပူး အသင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် နောက်ထပ် ဂုဏ်ယူစရာကတော့ လက်ဗ်ယာရှင် ဆုကို အသင်းရဲ့ဂိုးသမား အယ်လစ်ဆန်က ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘရာဇီးလ်သားဟာ ယမန်နှစ်က လိဂ်ပွဲ၂၁ ပွဲအထိ ဂိုးမပေးရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ရွှေလက်အိတ်ဆုဆွတ်ခူးထားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ လီဗာပူးနဲ့ အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အဆင့်၂ ၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား အောင်မြင်မှုတွေကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဘရာဇီလ်နဲ့အတူ ကိုပါအမေရိကဖလားကိုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း တာစတီဂျန်၊ အီဒါဆန် တို့ကိုကျော်ပြီး လက်ဗ်ယာရှင် ဆုကို သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Ballon D’ Or ဆု အတွက် ကစားသမားတွေ မဲ အရည်အတွက် ဘယ်လောက် ရခဲ့ ကြသလဲ ဆိုတာကို ပူးတွဲ ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ် ။
1st – Messi – 686 pts
2nd – Van Dijk – 679 pts
3rd – Ronaldo – 476 pts
4th – Mané – 347 pts
5th – Salah – 178 pts
6th – Mbappé – 89 pts
7th – Alisson – 67 pts
8th – Lewandowski – 44 pts
9th – Bernardo Silva – 41 pts
10th – Mahrez – 33 pts
11th – De Jong – 31 pts
12th – Sterling – 30 pts
13th – Hazard – 25 pts
14th – De Bruyne – 14 pts
15th – De Ligt – 13 pts
16th – Agüero – 12 pts
17th – Firmino – 11 pts
18th – Griezmann –9pts
19th – Alexander-Arnold – 8 pts
20th – Tadic –5pts
20th – Aubameyang –5pts
22nd – Son Heung-min –4pts
23rd – Lloris –3pts
24th – Koulibaly –2pts
24th – Ter Stegen –2pts
26th – Wijnaldum – 1 pt
26th – Benzema – 1 pt
28th – Felix –0pt
28th – Marquinhos –0pts
28th – Van der Beek –0pts